Parrot Security OS 3.0 "Lithium": yako yekushandisa yekushandisa | Linux Vakapindwa muropa
Parrot Security OS 3.0 "Lithium": yako yekushandisa yekushandisa
Isu tataura kare pazviitiko zvakawanda nezve kugoverwa kweLinux senge Kali Linux, DEFT kana Santoku, yakanangana nekuchengeteka. Iwo ma distros ayo anoverengera huwandu hukuru hwema pre-akaiswa maapplication ekuita ekuchengetedza ongororo, dhijitari forensics, kuita pentesting bvunzo, muchidimbu, yetsika kubiridzira mune zvakawandisa. Pakati pavo vese, isu takataurawo chaizvo nezve Parrot Security kana ParrotSec, uye ikozvino tazivisa kuti RC nyowani Parrot Kuchengetedza OS 3.0 codenamed Lithium.
Zviri pachena kuti ndezvezvino uye inounza yakakura turukushandisa yekuchengetedza komputa. Chikwata Frozenbox Network yaita basa rakakura rekuvandudza uye chigadzirwa chekupedzisira ndicho chaunogona kurodha mahara kubva kune yepamutemo webhusaiti yeiyi Linux distro. Pasina kupokana tichave tichiteerera uye tichishuvira kuburitswa kutsva uye shanduko yeiyi. Parizvino isu tinogona kuyedza iyi yekuvandudza yeanoshanda system yakanangana nekuchengetedzwa kwekombuta.
Kune avo venyu vasingazvizive parizvino, iyo distro yakavakirwa paGNU / Linux, kunyanya pa Debian 8 "Jessie" Akagadzikana. Naizvozvo, ine hwaro hwakasimba, hwakasimba, hwakasimba uye nharaunda huru kuseri kwayo. Asi avo veFrozenbox timu vaedza kuyedzerazve zvese izvi zvakasarudzika zvekubira maturusi uye haufanire kuisa chero chinhu: kubva kuforensics, cryptography, kusazivikanwa, reverse engineering, gore pentesting, kuvanzika, uye kumwe kubiridzira mashandiro.
Parrot Security OS 3.0 "Lithium" inogona kutorwa mumatanhatu akasiyana edhisheni. Kana iwe uchida, iwe unogona kuitamba yakachengeteka uye edza yakagadzikana vhezheni, 6, kana sarudza pane ino Regedza Mukwikwidzi we2.2.1. Zvinyorwa zviripo zvese zviri Cloud, Yakazara, Yakajairwa, zvese 32-bit uye 64-bit. Inosanganisira 100% yemahara software, mwenje LXDE nharaunda, Lightweight X11 Desktop Enviroment, kugadzirisa, kugadzirisa mapakeji uyezve mamwe mabugs akagadziriswa achienzaniswa neshanduro dzekare. Saka… enda mberi, download ikozvino uye kuedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Parrot Security OS 3.0 "Lithium": yako yekushandisa yekushandisa
Kuti utore distro ipapo. :)
Pindura kune Mari
Ini ndinopa kwamuri ArchStrike mutsivi weArchAssault